विद्यार्थीको कोठा यस्तो होस् । – Nepal Reports
विद्यार्थीको कोठा यस्तो होस् ।
विद्यार्थी रहने कोठाले विद्यार्थीको सभ्यता झल्काउँछ ।
विद्यार्थी रहने कोठाले विद्यार्थीको सभ्यता झल्काउँछ । कसैले पढ्ने कोठा अलग्लै बनाएका हुन्छन् भने धेरैले आफ्नो पढ्ने र सुत्ने कोठा एकै बनाएका हुन्छन् । विद्यार्थीको कोठामा केके चाँहि आवश्यक पर्ला त, चर्चा गरौँ यि विषयमा;
१. पढ्ने स्थान
धेरैको खाटमा घुडाँ मारेर लेख्ने/ पढ़ने बानी हुन्छ । तर कोठामा लेख्नका लागि एउटा टेबल र कुर्सीको उपलब्धता हुनपर्छ । टेबलमा अनावश्यक वस्तुहरू राख्नहुन्न । टेबल व्यवस्थित हुन पर्छ। प्रयोग हुने किताब कापीलाई चाङ लगाएर राख्न पर्छ र आवश्यक सामाग्रीलाई एउटा बक्समा राख्नपर्छ ।
विद्यार्थीको कोठामा एउटा दराज अनिवार्य छ । यन्त्रतन्त्र सामानहरू तथा पुस्तकहरू छर्दा कोठा असोभनिय देखिन्छ । दराजमा सदैव प्रयोगमा नआउने किताब कापि राख्ने तथा लुगाफाटो तथा अन्य सामग्री राख्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीको कोठा साधारण हुनपर्छ । पर्दा, बेडसिट, कार्पेट आदिको रंग उत्ताउलो हुनहुन्न । सकेसम्म विद्यार्थीको कोठामा सजावटका सामान राख्न हुन्न । भित्तामा सामान्य रंग लगाइएको होस । भित्तामा अनावश्यक चित्रहरू/ फोटोहरू टाँस्न हुन्न।
बरू पढाइसम्बधि फर्मूलाहरू/ आफ्ना रचना/ चित्रकला/ मोटिभेसनल विचार/ भनाइहरू टाँस्न सकिन्छ ।
४. उचित क्षेत्र
घर मध्ये सबैभन्दा राम्रो कोठा जहाँ उचित झ्याल छ, जहाँबाट प्रकृतिको सुन्दरता नियाल्न सकियोस्, दिउँसो मजाले घाम छिर्ने, राति शितल छिर्ने कोठा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्न पर्छ।
कागजका टुक्रा अथवा कुनै फोहोर फाल्न एउट डस्टबिन राख्नपर्छ । चार्जर/ एयरफोन आदि व्यवस्थित ढंगले राख्न पर्छ। मोबाइल, ल्यापटप, क्यालकुलेटर जस्ता इलेक्टोनिक सामाग्रीलाई छुट्टै स्थान दिनपर्छ । कोठमा आउने मानिसहरूका लागि एउटा सोफा अथवा चियर राखिदिन पर्छ ताकि उनिहरू सिधै खाट वा पढ्ने कुर्सीमा बस्न नपाऊन् । कोठा नियमित रुपमा सरसफाइ गर्न पर्छ। पढ्ने टेबल दिनको २ देखि ३ पटक मिलाउनपर्छ।